DOSBox: Ahoana ny fampiasana ny fiteny fandaharana DOS amin'ny GNU / Linux? | Avy amin'ny Linux
Ireo ampiasainay GNU / Distros Linux matetika, matetika isika dia mampiasa ny terminal (console), raha toa ny mpampiasa vitsivitsy an'ny Windows mazàna izy ireo. Ny sasany amin'ireo mpampiasa tranainy indrindra dia ireo izay zatra ny fampiasana azy io ihany, satria rindrambaiko novolavola na nilalaovana kilalao taloha.
Talohan'izay, mpampiasa maro an'ny GNU / Linux nahavita nihazakazaka ny fiteny fandaharana taloha na lalao faran'ny DOS mampiasa Dosemu, saingy tsy miasa intsony ity tetikasa ity, ary nalain'ny fampiharana ilay fampitana DOSBox, mamela ny mpampiasa hamerina hamorona ireny fotoana ireny.
Amin'ny tranga Dosemu, izay midika hoe anarany Fanahafana ny DOS, hoy ny fangatahana avela hihazakazaka a Rafitra miasa DOS ary programa DOS maro, ao anatin'izany ny fampiharana DOS maro DPMI (DOS Protected Mode Interface o Mode Interface voaaro ho an'ny DOS) toy ny lalao tsotra amin'ilay karazany loza amin'ny rindrambaiko sarotra toa Windows 3.1, ambany GNU / Linux. Izay no antony, mety tsara amin'ny fampandehanana ireo fiteny fandefasana programa taloha izay niasa teo ambanin'ny DOS, toa ny Foxpro, Pascal ary C, ankoatry ny maro hafa.
Na izany aza, Dosemu amin'izao fotoana izao dia manana fivoarana mifanila, antsoina Dosemu2 izay havaozina kokoa, ary izay azo idirana amin'ny alàlan'ity rohy manaraka ity: Dosemu2.
kosa, DOSBox dia programa maoderina sy havaozina izay manana tanjona mitovy, izany hoe a DOS emulator izay mampiasa ny Trano famakiam-boky SDL, izay mahatonga izany DOSBox ho tena mora ny mametraka amin'ny sehatra samihafa, toy ny Windows, BeOS, GNU / Linux, MacOS X, ankoatra ny hafa.
Ankoatra izany, DOSBox manahaka ny Fomba CPU: 286/386 tena / voaaro, ny lahatahiry XMS / EMS File System, tandy / Hercules / CGA / EGA / VGA / VESA, ary karatra feo SoundBlaster / Gravis Ultra Sound, hahatratrarana mifanentana tsara miaraka amin'ny fitenenana fampiharana taloha, indrindra ny Lalao DOS.
1.1 Ampidiro DOSBox
1.2 Amboary ary ampiasao DOSBox
DOSBox dia mavitrika amin'ny isan-karazany DEBIAN GNU / Distros Linux, araka ny hitanao amin'ny manaraka rohyNoho izany dia azo apetraka mora foana avy amin'ny terminal (console) amin'ny fampiasana ity andalana baiko manaraka ity:
sudo apt apetraho dosbox
Mba hampandehanana azy dia azonao atao ny mikaroka fotsiny ny menio programa ho an'ilay fampiharana DOSBox emulator ary mihazakazaka. Matetika ity fampiharana ity dia voarakitra ho fampiharana sokajy. «Lalao». Na fanatanterahana avy amin'ny terminal (console) amin'ny fampiasana ity baiko manaraka ity:
Amboary ary ampiasao DOSBox
Vantany vao nosokafana na nihazakazaka dia ny azy ihany boky fampianarana an-tserasera na amin'ny terminal (lehilahy dosbox) na manatona ny Wiki, hanombohana mampiasa. Na izany aza, ny zava-dehibe tokony hatao hanombohana ny fampiasana azy dia ny fametrahana a Virtual Drive (kapila) C aiza no hiavaka ny hafa Fandaharana DOS (tontolon'ny programa, lalao ary fampiharana isan-karazany) hovonoina izany. Araka ny aseho etsy ambany:
Fanamarihana: Ny lahatahiry "Appdosbox" mahazaka ny anaran'ny safidinao, ny anaran'ny "Folderx" tokony hosoloina ny anaran'ny fampirimana ny Fandaharana DOS (tontolon'ny programa, lalao ary fampiharana samihafa) fa efa naka tahaka azy io ianao taloha mba hovonoina, sy ny anaran'ny baiko "Executable.exe" Izy io dia tokony ho ilay mifanandrify amin'ny fanatanterahana izay tsy maintsy tanterahina hanombohana azy. Raha ny aminay, dia maka tahaka folder avy aminay izahay FoxPro ho an'ny DOS.
Farany fa tsy latsa-danja amin'izay, DOSBox manoro hevitra ao amin'ny Fizarana fampidinana, ampiasao ny sasany Fifanarahana sary (Frontend) hitantana azy ary hanova ny fiteny interface tsara amin'ny fiteninao eo an-toerana, raha te hampiasa azy tsara kokoa ianao. Ary na eo aza ny zava-misy, ao amin'ny lisitry ny Frontends tsy voasoratra DBGL, ity dia iray tena tsara sy mora ampiasaina.
Araka ny hitanao, DOSBoxIzany dia mahatalanjona DOS Emulator izay zatra fandaharana ao fiteny taloha DOS amin'ny Windows dia miasa tanteraka. Mijanona fotsiny ny fikarohana sy fampidinana ireo ilaina avy Internet ho fanatanterahana azy.
Manantena izahay fa izany "lahatsoratra kely ilaina" amin'ny «DOSBox», fitaovana karazana terminal ilaina, mora apetraka ary ampiasaina amin'ny anay Rafitra miasa malalaka sy misokatra, izay mamela antsika hanatanteraka Fampiharana DOS ao amin'ny sehatra Windows, toy ny fiteny sy lalao fandaharana taloha, dia mahaliana sy mahasoa be, ho an'ny rehetra «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» ary fandraisana anjara lehibe amin'ny fanaparitahana ny tontolo iainana mahatalanjona sy goavambe ary mitombo «GNU/Linux».
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » DOSBox: Ahoana ny fampiasana ny fiteny fandaharana DOS amin'ny GNU / Linux?
XAMPP: tontolon'ny fampandrosoana PHP mora apetraka amin'ny GNU / Linux